Amazon inokumbira dare kumisa chero basa reMicrosoft kuJEDI | Linux Vakapindwa muropa
Kuenderera mberi nekutevera kunyunyuta kwakaiswa neAmazon kupikisana nePentagon mwedzi mishoma yapfuura. Muvhiki yapfuura Amazon yakati yaizopa faira rekudzivirira kwenguva pfupi kudzivirira kwenguva pfupi Microsoft kutanga basa pane hombe Pentagon gore JEDI chibvumirano chekuvandudza tekinoroji yeuto reUS.
Kubva Chitatu chekupedzisira akapa chikumbiro chekutonga kumanikidza US department reDziviriro neMicrosoft kumisa zviitiko zvese zvekutanga yechibvumirano kudzamara dare razvisarudzira pachichemo chako kupokana nemubhadharo wechibvumirano.
Sezvo Amazon pakutanga yaionekwa seinodiwa kuhwina chibvumirano, asi zvainge zvisina kudaro sezvo muchirevo chekupa chibvumirano kuMicrosoft, Ministry of Defense yakati maitiro ekutora akaitwa "maererano nemitemo nemirau inoshanda." Uye kuti mazita ese "akabatwa zvakaenzana uye akaongororwa zvichienderana nematanho ekuongorora akagadzwa muchikumbiro chethenda."
Asi gore reAmazon rakareva munaNovember kuti "zvakawanda zvehurongwa hwekuongorora kweJEDI zvine zvipenga zviri pachena, zvikanganiso uye kusarura uye zvakakosha kuti nyaya idzi dziongororwe nekugadziriswa" vasati vakwidza kondirakiti.
Mune chirevo chakaburitswa Chitatu chapfuura, AWS yakanyora kuti:
"Zvakajairika kumisa kushanda kwechibvumirano apo kuratidzira kuri kuitika uye zvakakosha kuti pave nekuwanda kwekukanganisa uye kupindira kuri pachena kwezvematongerwo enyika izvo zvakakanganisa sarudzo yemubayiro weJEDI iri kuongororwa."
Microsoft inotarisirwa kutanga kuzadzisa chibvumirano muna Kukadzi 11, sezvo United States yakaronga mabasa anofanirwa kupihwa pasi peJEDI sezvaidiwa nekukurumidza kutsigira kuchengetedzeka kwenyika.
"AWS yakazvipira chose kutsigira kuedza kuvandudza DoD nekumisikidza hurongwa hwepamutemo hunogadzirisa nyaya iyi nekukasira," mutauriri weAWS akawedzera muchirevo Chitatu.
Mukukumbira kwako kwechibvumirano, Amazon inotiwo Mutungamiri Trump "akatanga kurwisa kakawanda, pachena uye kuseri kwezviitiko kukuvadza muvengi wake wezvematongerwo enyika anonzi Jeffrey P. Bezos »muvambi uye CEO weAmazon, uyo aripowo Washington Post
Andy Jassy, ​​CEO weAmazon Web Services, akataura muna Zvita apfuura kuti chibvumirano chekushandisa gore hachina kutongwa zvakaenzanirana
Kana paine purezidhendi wazvino ari kuda kutaura pachena kuti haadi kambani uye CEO wekambani iyoyo, zvinonetsa kuti vamiriri vehurumende, kusanganisira veDhipatimendi reDziviriro, vatore zvisarudzo zvine chinangwa vasingatyi kutsiva uye ndinofunga zvine njodzi uye zvine njodzi kune nyika yedu «,
Sekureva kweshumo yemubatanidzwa yakamisikidzwa svondo rapfuura, United States neMicrosoft "vane tarisiro yekuisa zvikumbiro zvekuramba" chikumbiro cheAmazon nechikonzero chekuti yaifanirwa kunge yakamhan'arwa kare.
Microsoft CEO Satya Nadella akatsanangura svondo rapfuura nei timu yako yakasarudzwa pamberi peAWS yakapihwa iyo gore rinopa Microsoft yakahwina chibvumirano Pentagon Cloud Komputa Pamberi Rival Amazon Web Services nekuda kwekudyara kwako mugore rehybrid.
Zvinoenderana nemaitiro aMicrosoft yekomputa yegore, iyo inosimbisa kuenzanisa pakati peveruzhinji neyakavanzika zviwanikwa, yanga iri mukufarira nzanga.
"Tisu chete nhasi vane kugona kugovera maverengero, kupokana nedhata, uyezve kuve nehutungamiriri, chengetedzo uye kuenderana kwedata pakati pemabhodhi maviri aya." Sezviri pachena inoreva komputa yemuno uye gore komputa. "Chinhu chakaoma." Akawedzera kuti "isu tangovaka chinzvimbo chehutungamiriri mune izvo zvinotsanangurwa nevanhu sehybrid komputa."
Asi Amazon Web Service haisati yataura izwi rayo rekupedzisira panhau iyi. Kufona kwako kupihwa mubairo wekondirakiti kuchatiisa mumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Amazon inokumbira dare kuti rimise chero basa reMicrosoft kuJEDI
LosslessCut, chishandiso kupatsanura mavhidhiyo uye odhiyo nenzira yakapusa